Apple ee macruufka ugu danbeyn halkaan waa! Dhaleeco 'Boqortooyada', nidaamka qalliinka cusub ka hawlaha Apple qalabka sida mobiilka iPhone iyo iPad iyo waxa ay mar horeba ku riyaaqayaa dalashada. Ka dib markii ay soo bandhigistaan ​​rasmi ah dhowr maalmood ka dib, barbardhigo ururka ka horeeyey ayaa goor hore bilowday iyo hagaagsan tihiin. Laakiin hal wax oo Apple u qalmaa in la tiriyo, waayo waa habka sida wax ku ool ah iyo smartly u hayaa wax ka yar dhanbiilaha waxa horumarinta on version 9aad. In kastoo aan ahayn kuwo gaar ah oo ku saabsan arrimo 9 ee guud ahaanteed, laakiinse waxaynu ku sii na soo gaarin rajeynaya liiska na waa la siin doonaa.
Arrintan oo loo yaqaan macruufka 9
Apple ayaa marna ku fashilantay in ay soo kadis ah u ifaaya, inay daacad u ah iyo macruufka 9 waa inuu marag u noqdo in. Nidaamka qalliinka mobile-socda Qarniganu lagu dhawaaqay ee 'Worldwide Horumarinta Shirka 2015, lagu qabtay Moscone Center West ee San Francisco ee 8 June, 2015.
Iyada oo macruufka 9 diiradda inta badan ku saabsan 'sirdoonka iyo pro hawl-', dadka isticmaala loo baahan yahay in gacan-ku caadooyinka yar in laga helo ee 7aad iyo 8aad versions. Sidaas waxa ay u badan tahay in ay ka filayaan aad tahay rajeenayo, xasiloonida, ayna, garab uga faaidaysan design khiyaano, shaqeynta fiican, sifooyinka la safeeyey iyo in aan la iloobin, uqaadineed yar.
Top 10 waxyaalo cusub oo ku saabsan Apple macruufka 9
Tani waa tan feature ugu muhiimsan ee macruufka 9. Qaybta A Nidaam ballaaran oo u ogolaanaya qalabka si ay isu bartaan caadooyinka isticmaala iyo sidoo kale bixiyaan talooyin saldhig waqtiga, meesha iyo dhaqdhaqaaqa, tani waa Apple ee Google!
La yaabka leh batari Life
In horumarka ugu danbeeyay ee Apple ayaa version cusub, horumar weyn oo ah qaab ah nolosha batari la dheereeyey ka dhigan tahay waxaa loo baahan yahay ma jirto in ay beddelaan in ka badan si ay u phone kale qaar ka mid ah. Sidaas xitaa marka xogta ama Bluetooth, Wi-Fi waxaa lagu hayaa, ee 'awood yar' hab ku filnaan doonto.
Pay Apple iyo boorsada jeebka
Passbook waxaa Daadiyey jacaylka qaar ka mid ah oo uu helo magaca cusub, Salada. Sida hore, kaydinta kaararka iyo jiif baas la oggol yahay iyo sidoo kale daacad, kaararka abaalmarin, Baro iyo xitaa kaarka dukaanka. Hadda Apple Pay waxaa isku baheysanaya la Square, akhristayaasha cusub card contactless awood laga yaabaa aqbalay Apple Pay.
Tani waa dhawaaqay lama filaan ah. The News App cusub ka dhigan tahay Flipboard, laakiin u muuqataa wanaagsan. Sidaas darteed haddii aad rabto in la abuuro magazine caado u content xiiso leh qaar ka mid ah bixiyayaasha ugu waaweyn sida Conde Nast, New York Times iyo in ka badan ah, aad u hesho this.
iPad multitasking screen kala
Kasta oo dhawaan iPad la macruufka 9 taageeri doonaa multitasking. Just weerar dadban ku tagay dhinaca shaashadda si ay u soo jiid ilaa suuqa kala SlideOver ah. Waxaad isticmaali kartaa oo kaliya app ah in ay isticmaali karo. Laakiin ka jaftaa qaybiye iyo iPad la geeyo hab multitasking wada aad jidaynayey laba barnaamijyadooda isticmaali karo.
Apple Maps bixiyaan feature transit cusub ku tilmaamey in la tarin karaa iyadoo tiro kooban oo magaalooyinka waqtiga xaadirka ah. Waxaad ka heli kartaa wax kasta oo ka soo basaska, metro si ay u tababaraan tilmaamaha in app. Waxa ugu fiican waa in ay wax badan ka wanaagsan tahay Google Maps.
Settings iyadoo ay xulashada ah search
Ugu dambeyntii goobaha la iman doorasho raadinta smart! Waxaad dari karaa qalab macno-xasaasi weyn waxa ku jira, Kuna shaqeeyaan yaabab. Sidaas darteed haddii aad qorshaynaysid u Alighieri ah, ku dhajisan in ay raadiso goobo ka.
Lahaanshaha Siri ah updated ka dhigan tahay Dhawaaq badan iyo lahjado hadda jira ee aad qubo. Laakiin sidaas maaha oo dhan! Iyadoo interface cusub iyo is-dhexgalka qoto dheer, macruufka 9 leeyahay afkaaga iyo kala cod Siri ee laba door bidaan oo kala duwan.
Barta bartamaha baadi barnaamijyadooda gudahood
In version 9, taageero barnaamijyadooda dhinac saddexaad 'waxaa loola jeedaa Barta bartamaha awood u yeelan doonaan in ay baadhaan magacyada app iyo sidoo kale barnaamijyadooda ka. Miyaanay taasi ahayn yaabka leh?
Keyboard Best ee iPad
Waxaa laga yaabaa, taas oo ka dhigaysa loogu jecel kulul ku dhex badan. The keyboard cusub QuickType u ogolaanaya mid loo isticmaalo sida suuf track ah adigoo laba farood ku yaal iyo sidoo kale sii agagaarka dhaqaaqin. In sidaas la sameeyo, dulqabo qoraalka laga soo galo ee la oggol yahay in la dhaqdhaqaajiyo in app wax agagaarka shaashadda. Ma aha oo kaliya ayey booska ku dulqabo fudud si ay ula qabsadaan sameeyo laakiin sidoo kale ma gaaro dadka isticmaala ka faa'idaysan lahaa booska ee shaashadda mar kasta.
Waxaa jira in ka badan in aad ku baadhi doonaa mar macruufka 9 helo caadi yihiin. Sidaas sii wado la raadintaada!
Sida loo soo biiray Android inay macruufka
> Resource > macruufka > 10 Features Brilliant Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Apple macruufka 9